DHAGEYSO:Ismaamulada waqooyi bari oo ka mid ah kuwa berri laga cabsi qabo inay saameyso shaqa joojinta kalkaaliyayaasha dalka – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Ismaamulada waqooyi bari oo ka mid ah kuwa berri laga cabsi qabo inay saameyso shaqa joojinta kalkaaliyayaasha dalka
Star FM February 3, 2019
18 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan Garissa, Wajeer iyo Mandhera ayaa laga cabsi qabaa inay saameyso shaqa joojinta berri ay ku dhaqaqayaan kalkaaliyayasha wadanka.
In kastoo ay isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda maamul goboleedyada inay heshiiyaan haddana xoghayaha guud ee ururka qaran ee kalkaaliyayaasha Seth Panyako ayaa ku adkeysanaya inay ka dhabeynayaan hajabadii ay maalmo ka hor soo saareen
Mas’uuliyiinta baaqa ka soo saaray ismariwaaga taagan waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Ken Lusaka iyo senetarka ismaamulka Bungoma Moses Wetangula.
Waxay u soo jeediyeen in kalkaaliayaasha ay u turaan shacabka oo aynan ka dhabeyn shaqa joojinta.
Mr. Seth Panyako ayaa madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ku dhaliilay inuu u fasaxay siyaasiyiin inay maamulaan waaxda caafimadka sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inaan guddoomiyaasha maamul goboleedyada lagu fasaxi karin howlaha caafimadka maadama uu ku eedeynayo inay leeyihiin dano u gaar ah.
Seth Panyako, ayaa sheegay inaynan ogolaan doonin wax heshiis ama dhexdhexaadin ah.
Waxaa uu sido kale carrabka ku dhuftay inuunan awood u lahayn inuu meesha ka saaro shaqa joojinta qorsheysan.
Waxaa uu sido kale wacad ku maray in shaqa joojinta ay ku dhaqaqayaan ay noqon doonto mid aanan fududeyn kenyaanka ayuuna ku wargeliyay inay isku diyaariyaan saameynta soo foodsaari karto.
Kalkaaliyayaasha dalka ayaa dowladda ku eedeynaya inay ku fashilantay in la dhaqangeliyo heshiis ku aadanaa mushaar kordhin oo la saxiixay sannadkii hore ee 2018-kii.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii xoghayaha guud ee ururka qaran ee kalkaaliyayaasha ee KNUN, Mr. Seth Panyako uu faahfaahiyay ismaamulada lacagaha laga doonayay bixiyay iyo kuwo aanan ku guuleysan ee shaqa joojinta ay saameyn doonto waxaana xilligaasi hadaladiisa ka mid ahaa
Wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada Ukur Yatani ayaa dhankiisa amar ku bixiyay in arrinta kalkaaliyayaasha loo xilsaaro gudi iskudhaf ah oo xal u raadiya khilaafka jira in kastoo kalkaaliayaasha ay ku andacoonayaan inaan ilaa iyo hadda dhag jalaq loo siinin.
← Dowladda Iiraan oo soo bandhigtay gantaal cusub
DHAGEYSO:Muslimiinta oo laga codsaday inay ka qeyb qaataan dayactirka dugsi ku yaallo Bangal →